မဆိုအငြင်းအခုံအနိုင်ရလုပ်နည်း: Pseudo-သိပ္ပံနည်းကျ neuro-gibberish - သတင်း Rule
မဆိုအငြင်းအခုံအနိုင်ရလုပ်နည်း: Pseudo-သိပ္ပံနည်းကျ neuro-gibberish
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “မဆိုအငြင်းအခုံအနိုင်ရလုပ်နည်း: Pseudo-သိပ္ပံနည်းကျ neuro-gibberish” Jules ဂူကရေးသားခဲ့သည်, အင်္ဂါနေ့က 5th, May အပေါ်အဆိုပါဂါးဒီးယန်းများအတွက် 2015 17.52 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင်ဤရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးအငြင်းအခုံအနိုင်ရမှမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်, neuro-gibberish ပြောနေတာကြိုးစားကြည့်ပါ. မသက်ဆိုင်သောမှ neuroscience သတင်းအချက်အလက် - သို့မဟုတ် "neurobabble" - အရှိဆုံးယုံကြည်သိပ္ပံနည်းကျရှင်းလင်းချက်စေသည်, Villanova တက္ကသိုလ်နှင့်အော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများသည်နှင့်အညီ.
သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေး၏ 385 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်၏ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတိုချုပ်ဖော်ပြချက်, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုအပါအဝင်, Spatial မှတ်ဉာဏ်, နှင့်စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ, သူတို့အဘို့အပိုရှင်းလင်းချက်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားအသီးအသီး, မှ neuroscience မှဆင်းသက်လာ, လူမှုရေးသိပ္ပံ, ထိုကဲ့သို့သောရူပဗေဒအဖြစ်သို့မဟုတ် "ခက်" သိပ္ပံ. Neuroscientific ရှင်းလင်းချက် - ထိုသို့သော "prefrontal cortex" နှင့် "အာရုံကြော circuitry" အဖြစ်စာပိုဒ်တိုများပတျသကျ - တသမတ်တည်းအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချ rated ခဲ့သည်, သတင်းအချက်အလက်ကြိုးကြီးနှင့်မျှမတို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုတို့ကိုပူဇော်ကြ၏လျှင်ပင်. အဆိုပါစာရေးဆရာသင်တန်းသားများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်အဘို့အဆုံးသှေးဆောငျရှင်းပြချက်ဖြစ်မှ neuroscience တွေ့သောကောက်ချက်ချ, ဒါကြောင့်မဖြစ်သင့်လျှင်ပင်.
သင့်လျော်စွာသုံးတဲ့အခါ, မှ neuroscience အစွမ်းထက်သည်. Neurobabble, သို့သော်, မဖြစ်. ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖို့ဘယ်လိုမှတစ်ဦးအမြန်လမ်းညွှန်င်, ကိုယ့်တစ်ဦးအငြင်းအခုံအနိုင်ရ:
နှုတ်ကပတ်တော် '' neuroplasticity '' ကိုသုံးပါ, ထွက်ရှိသောတစ်ဝါကျထဲမှာ
ဥပမာအားဖြင့်: "ငါ့ဦးနှောက်၏ neuroplasticity ဝတ္ထုအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကဖန်တီးသောကွောငျ့အကြှနျုပျသ SNP အကြောင်း, ငါ၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ "
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ: ထိုသို့အခြေအနေတွင်ထဲကကိုအသုံးပြုမယ့်အခါ,, မဟုတ်ပါ. Neuroplasticity သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ရန်အနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏စွမ်းရည်သည်, function ကိုနှင့်ဆက်သွယ်မှုကို. ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုထင်အဘယ်ကြောင့်မရှင်းပြပါဘူး.
အနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex အလင်းရောင်တက်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်ဒဏ်ဍာရီ
ဥပမာအားဖြင့်: "ကျနော်တို့ကသူတို့တစ်တွေကင်နာများအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုထားသောကွောငျ့လူအိုင်ဖုန်းကိုချစ်သိ, သူတို့ကိုတဦးတည်းပြသနှင့်၎င်းတို့၏နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex တက် lit ။ "
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ: နီးပါးဘာမျှမ. အဆိုပါနောက်ကျနေခဲ့သည် cortex နေပါစေလူတစ်ဦးစကင်နာကိုပြုကြဖို့တောင်းနေကြတယ်ဆိုတာကိုအားလုံး fMRI လေ့လာမှုများ၏တတိယထ်လင်းလိမ့်မည်.
ကြေးမုံအာရုံခံ ပတ်သက်. ကြီးကျယ်သောတောင်းဆိုမှုများ Make
ဥပမာအားဖြင့်: "ကြေးမုံအာရုံခံလူ့စာနာမှု၏အခြေခံဖြစ်ကြောင်း, လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏တစ်ခုလုံးကိုပေါ်ပေါက်ရေး, နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပုံသဏ္ဍာန်."
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ: ဤသည်အကြွင်းမဲ့အာဏာ codswallop ဖြစ်ပါသည်. ကြေးမုံတွင် neuron, သောမီးမျောက်များတစ်ခုခုလုပ်ဒါမှမဟုတ်သူချင်းမျောက်ကလုပ်နေတာမြင်သောအခါ, "မှ neuroscience အတွက်အများဆုံးဖောင်းပွအယူအဆ" ဟုခေါ်ကြပြီ. သို့သော်ထိုသုတေသနပြုချက်ဖြစ်ပါသည် သေးလူသားလျှောက်ထားရန်သက်သေပြမ.
သငျသညျ "Parklife ကြွေးကြော်နိုင်လျှင်!hippocampus "" သို့မဟုတ် "fusiform gyrus" "ဟူသောစကားလုံးနှင့်အတူသင်၏ဝါကျရဲ့အဆုံးမှာ" တစ်နေရာရာမှာအလယ်၌, သငျသညျ neurobabble ကျွမ်းကျင်ပါဘူးတဲ့အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ.
22012	0 အပိုဒ်, Blogposts, မှတ်ချက် & အင်္ဂါရပ်များ, အင်္ဂါရပ်များ, G2 မှာ, Jules ဂူ, neuroscience, စိတ္ပညာ, သိပ္ပံ, shortcuts, အုပ်ထိန်းသူ
← အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအခွအေန၏အန္တရာယ်မှာအချိန်မတန်မီကလေးကပို. အန်းဒရွိုက်၏နောက်တစ်နေ့ဗားရှင်းဟာသူ့ရဲ့လမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ထိုသို့အဘယျသို့ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်? →